मान्छेहरु तिमी ‘सक्सेस’ भयौ भन्छन्, तर मलाई त्यो ‘फिल’ भएको छैन: स्वस्तिमा खड्का
२०७६ कार्तिक १६ शनिबार ०८:२४:००
स्वस्तिमा खड्का नेपाली चलचित्र उद्योगमा अहिले रोजाइकी नायिका हुन् । ‘होस्टल रिटन्र्स’बाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरेकी उनले ‘लभ लभ लभ’बाट मुख्य अभिनेत्रीका रुपमा आफूलाई प्रतुत गरिन् । ‘छक्का पञ्जा–२’, ‘जय भोले’, ‘नाइँ नभन्नु ल–५’ मा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरिन् । चलचित्र ‘बुलबुल’मा ‘रणकला’को भूमिका निर्वाह गरेकी उनका निम्ति यो चलचित्र फिल्मी करिअरमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनिदियो । ‘बुलबुल’यता चलचित्रमा उनको माग चुलिएको छ । ‘अफ बिट’का चलचित्र प्राथमिकतामा राख्ने स्वस्तिमा कमर्सियल मुभी पनि आफ्ना लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछिन् । कलाकार तथा मेकरहरु आफ्नो चलचित्रको क्रिटिकल समीक्षा सहन नसकिरहेका बेला उनी भने खुला हृदयले समीक्षाको स्वागत गर्छिन् । र, रचनात्मक आलोचनालाई आत्मसात गर्छिन् । उनी आफ्नो प्रतिभामा निखार ल्याउन ‘बुलबुल’ र त्यसका निर्देशक विनोद पौडेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछिन् । सँगै दीपकराज गिरीका केही भनाइले पनि उनलाई आफ्नोे कामप्रतिको जिम्मेवारी र लगाव वृद्धि गर्न सहयोग गरिरहेको उनी सुनाउँछिन् । उनै स्वतिमा खड्कासँग बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीको सारः
‘हिरोइन’बाट ‘अभिनेत्री’को छलाङ मार्नुभयो । ‘बुलबुल’जस्तो चलचित्र गर्न किन यति ‘धेरै कुर्नुभयो ? बक्स अफिसको सफलता महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ कि आलोचक र गम्भीर दर्शकहरुको वाहवाही ?
मैले कुरेको भन्दा पनि मेकरले कुराएको हो । मैले कुरिरहेको थिएँ, मेकरले अफर गर्नुभयो । म पहिलादेखि नै तयार थिएँ, यस्तो चलचित्रमा काम गर्न । अहिले पनि तयार नै छु । ‘बुलबुल’जस्तो चरित्रप्रधान चलचित्रका लागि म सधैं तयार नै छु । ‘अफ द बिट’का चलचित्रमा काम गर्न मलाई रुचि छ । दर्शकका हिसाबले पनि ‘बुलबुल’जस्तो चलचित्र मलाई मन पर्छ । मैलै ढिलो गर्नुभन्दा पनि सायद मेकरले मलाई नै विश्वास गर्नुभएको थिएन होला ।
मेरो विचारमा बक्स अफिस र आलोचकको ताली दुवै महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा मात्रै पक्षलाई यही राम्रो भन्न हुँदैन सयाद । जति खुसी म मेरो चलचित्र बम्पर हिट हुँदा हुन्छु त्यति नै समीक्षकले राम्रो भन्दा हुन्छु, त्यसले थप हौसला पनि प्रदान गर्छ ।
मनोवैज्ञानिक चरित्रहरु गर्दा आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्वमा कतिको असर गर्छ ? चलचित्र सकिएर नयाँ प्रोजेक्टमा जाँदा पुराना पात्रहरुको माया लाग्छ कि लाल्दैन ? त्यो ‘डिपार्चर’ सजिलो हुन्छ कि अप्ठ्यारो ?
ठूलो असर नै त पर्दैन । म ‘मेथड एक्टर’ पनि हैन । मैले अहिलेसम्म पूरै क्यारेक्टरमा डुबेर काम पनि गरेको छैन । आफूले काम गरिरहेको चरित्रमा डुबेर जता जाँदा पनि त्यही क्यारेक्टरमा हिँडेको छैन, त्यसैले पनि मलाई त्यति धेरै गाह्रोचाहिँ भएको छैन ।
तर कतिपय क्यारेक्टर गर्दा त्यसको अवस्था बुझ्दा सिक्ने मौकाचाहिँ पाएको हुन्छु । ‘बुलबुल’को चरित्र गर्दा यस्तो भोगाइ हुँदोरहेछ भन्ने सिकिरहेको महसुस भयो । यस्तो पनि हुनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । ‘रणकला’को भूमिकामा काम गर्दा इमोसनल क्राइसिसमा पनि छोरी मान्छे ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ भयो भने हरेक समस्याको समाधान गर्न सक्दोरहेछ भन्ने सिकेँ ।
एउटा पात्रबाट अर्को पात्रमा जाँदा मैले शतप्रतिशत ‘मेथड एक्टिङ’ नगर्ने भएकाले पनि होला त्यस्तो गाह्रो भएको छैन । जति ‘रणकला’को क्यारेक्टरमा म एट्याच भएको थिएँ, त्यति नै त्यसपछि गरेका क्यारेक्टरले मलाई नतान्दा ‘रणकला’लाई सम्झिरहन्छु । तर एउटाबाट अर्कोमा जान गाह्रो नै चाहिँ भएको छैन ।
‘निश्चल बस्नेतले गर्दा मात्र यति अवसर पाएको हो’ भनेर कुरा काट्नेहरुलाई ‘बुलबुल’द्वारा गतिलो जवाफ दिनुभयो । तपाईंको रोजाइमा अब मसालेदार फिल्म पर्छन् या गम्भीर ?
कसले के भन्छ भन्दा पनि काम गर्दै जाने हो । सकेसम्म आफूलाई परिमार्जन गर्दै जाने हो । कामको मूल्याङ्कन हुन्छ । र, भएको पनि छ ।
मेरो रोजाइ त पक्कै पनि चरित्रप्रधान चलचित्र नै हुन्छ । ‘बुलबुल’कै स्क्रिप्ट मसम्म आउँदा पनि यो चलचित्र बक्सअफिसमा हिट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन । चरित्रप्रधान भनेर नै गरेको हुँ । चौथो हप्तासम्म एक सो मात्रै रहँदा पनि जति दर्शक आउनुभयो र जस्तो प्रतिक्रिया मैले पाएँ, त्यो नै अपेक्षा गरेभन्दा धेरै सकारात्मक थियो । कमर्सियल चलचित्र नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । ‘बुलबुल’ नै उदाहरण हो । तर मेरा लागि कमर्सियल मुभीले पनि अर्थ राख्छ । किनभने कमर्सियल चलचित्र सहरदेखि गाउँसम्म हजारौं दर्शकले हेर्नुहुन्छ । कमर्सियल चलचित्र वा गीतमा काम गरेर आमदर्शकमाझ म पुगेँ भने भोलि ‘बुलबुल’जस्तो चलचित्रमा काम गर्दा ती दर्शक त्यो चलचित्रमा ‘क्यास’ गर्न पाउँछु । जो ‘बुलबुल’जस्तो चलचित्र नेपालमा बन्छ भनेर थाहा पनि पाउनुहुन्न, उहाँहरुलाई मैले यस्तो चलचित्रमा ल्याउन सक्छु कि सक्दिनँ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । कमर्सियल र आर्ट दुवै चलचित्रले मेरो करिअरमा उत्तिकै अर्थ राख्छ ।
फिल्म बनाउन फिल्म पढ्नैपर्छ ? चलचित्र नपढेको निर्देशक र चलचित्र पढेको निर्देशकसँग काम गर्दा के फरक अनुभव पाउनु भयो ?
यो प्रश्न मैले प्रतिक्रिया दिन मिल्छ जस्तो लाग्दैन । म आफैं पनि फिल्म पढेर आएको कलाकार हैन । कुनै त्यस्तो नियम पनि छैन फिल्म पढेका निर्देशकले मात्रै निर्देशन गर्न पाउने र नपढेकाले नपाउने । तर काम गर्दाको अनुभवको कुरा पढेको र नपढेकोमा भिन्नताचाहिँ हुन्छ । ‘बुलबुल’ निर्देशक विनोद पौडेल दाइको यो चलचित्र पहिलो थियो । पहिलो चलचित्र हुँदाहुँदै पनि उहाँसँग धेरै अनुभव रहेको पाएँ । किनभने उहाँ चलचित्र पढेको र पढाएको व्यक्ति हो । त्यही चलचित्र फिल्म नपढेको पहिलो निर्देशकले गर्नुभएको भए सायद त्यति सजिलो हुँदैनथ्यो होला । उहाँ एक्टिङको टिचर पनि हो । त्यसैले म उहाँसँग भन्थेँ, म पैसा लिएर तपाईंसँग एक्टिङ सिकिरहेको छु । अरु एक्टिङ पैसा तिरेर सिक्छन्, मैले पैसा लिएर सिकिरहेको थिएँ । विनोद दाइबाट मैले कति धेरै कुरा सिकेँ । अहिले पनि उहाँसँग सिकेको कुरा धेरै ठाउँमा लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु ।
अरु निर्देशक चलचित्रका लागि काम गर्छन् तर विनोद दाइ कलाकारका लागि चलचित्र बनाइदिनुहुन्छ । कलाकारबाट शतप्रतिशत निकाल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ । तर ‘थप राम्रो ग¥यो भने मात्रै हुन्छ’ भन्नुहुन्छ । अरु निर्देशक सिन राम्रो भए हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर विनोद दाइ सिनसँगै कलाकारको काम पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ ।
समाजका वास्तविक ‘दुःखी’ चरित्रहरुको भूमिका निर्वाह गर्दा उनीहरुप्रति जाग्ने करुणाले अभिनयमा असर पार्छ कि पर्दैन ? एउटा कलाकारले अभिनय र आफ्ना भावनाहरुबीचको सीमा कसरी कोर्ने ?
दुःखी भइन्छ । माया पलाउँछ । यस्ता पात्र समाजमा यत्रतत्र छरिएर रहेका छन् भन्ने पनि थाहा हुन्छ । तर पनि मैले चलचित्रमा गरेको क्यारेक्टर फिक्सनल हो भन्ने थाहा हुन्छ । वास्तविक क्योरक्टर होइन, वास्तविकतामा पुगेर भोगेको जस्तो गर्ने मात्रै हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले म ‘रणकला’लाई दुःखी भन्दा पनि सशक्त क्यारेक्टरका रुपमा लिन्छु । इमोसनल क्राइसिस हुँदाहुँदै पनि जसरी ऊ एक्लै स्वाभिमानी भएर बाँचेकी छे, यसलाई म सशक्त क्यारेक्टर मान्छु ।
मैले सुरुदेखि नै थिएटर आर्टिस्टसँग काम गरेँ । मैले सधैं सुनेको क्यारेक्टरमा छिरेर अभिनय गर्नुपर्छ । मैले कुनै सट दिएँ भने ‘तिमी क्यारेक्टरमै छैनौ’ भन्ने हुन्थ्यो, यसले मलाई सधैं प्रेसर दिन्थ्यो । कस्तो रहेछ यो क्यारेक्टरमा छिर्ने भनेको । मलाई त कुनै विधि पनि थाहा छैन क्यारेक्टरमा छिर्ने । सुन्थेँ र म प्रयास गर्थें क्यारेक्टरमा छिर्न । कस्तो हुँदोरहेछ, क्यारेक्टरमा छिर्दा मलाई अनुभव लिनु पनि थियो । क्यारेक्टरमा छिर्दा मैले स्वस्तिमा खड्का भनेर आफैंलाई बिर्सिने पो हो कि जस्तो लाग्थ्यो । तर मलाई थाहा थियो, यो ड्रामा हो । क्यामेरा छ । डिरेक्टर छ । सबै थाहा हुँदाहुँदै कसरी गर्ने हेला भन्ने लाग्थ्यो । सक्दिनँ भन्ने लाग्थ्यो ।
एक दिन हामी ‘बुलबुल’को वर्कसपमा थियौं । मैले विनोद दाइलाई सोधेँ, विनोद दाइ क्यारेक्टरमा छिर्ने भनेको के हो ? हन्ड्रेड पर्सेन्ट म गर्नै सक्तिनँ । ५० प्रतिशत पनि सक्तिनँ । किनभने फेक गरिरहेको छु भन्ने मलाई थाहा छ ।
विनोद दाइले भन्नुभयो– क्यारेक्टरमा कहिले पनि छिर्ने होइन । क्यारेक्टर बुझेर त्यसलाई लिने हो । त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ । क्यारेक्टरमा छिर्ने भनेको के हो । जति सकिन्छ, त्यति लिने हो । यो कुरा म कहिल्यै बिर्सिन सक्तिनँ ।
केही वर्षअघि कसैले नचिन्ने मानिस अहिले सबैको प्यारो हुँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? सफलताको ‘नशा’ बढ्दै जान्छ ? कि एउटा निश्चित समयपछि सफलता पनि पट्यारलाग्दो हुन्छ ? भन्न खोजेको कुरा तपाईंलाई ‘फेम’ पुगिसक्यो कि अझै बाँकी छ ?
फरक त पक्कै पनि हुन्छ । दर्शकले हेर्ने नजरमा परिवर्तन आउँछ । बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिले दिनदिनै देखिरहेको जस्तो, आफ्नै परिवारको सदस्यजस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ । जब कि उहाँहरुलाई मैले चिनेको हुन्नँ । मन पराउनेले मेरो घरकै मान्छेको जस्तो र मन नपराउनेले उहाँको काम नै बिगारिदेको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ । फरक हुँदोरहेछ ।
मैले यो क्षेत्रमा आउँदा फ्यानफलोइङ हुन्छ । सपोर्टर र हेटर हुन्छ भनेर सोचिनँ । यो त पछि मात्रै मैले अनुभव गरेँ । मलाई चलचित्रमा आउनु थियो । अभिनय गर्नु थियो । मोडलिङ गर्नु थियो, गरेँ । म भोलि फेमस हुन्छु, फ्यान फलोइङ हुन्छ, अडियन्स हुन्छ भनेर सोचेर आएको थिइनँ ।
कुरा रह्यो– सफलताको । राम्रो कामको भोक कहिल्यै नमेटिनेरहेछ । एउटा राम्रो फिल्ममा राम्रो काम गरिसकेपछि यो भन्दा राम्रो अर्को, त्यो सफल भइसकेपछि अर्को गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दोरहेछ । मान्छेहरु तिमी सक्सेस भयौ भन्छन्, तर मलाई त्यो फिल नै भएको छैन । अभिनयलाई म जागिरभन्दा पनि ‘प्रोफेसन’ भन्न मन पराउँछु । कहिलेकाहीँ धेरै काम गर्नुपर्दा ह्या... कति एउटै, एकै खालको काम गर्नुजस्तो चाहिँ लाग्छ । धेरै भीडभाडमा फोटो खिच्न तानातान गर्दा कहिलेकाहीँ झ्याउ पनि लाग्छ । तर मैले रोजेको क्षेत्र नै यही हो भन्ने बुझ्छु ।
दीपकराज गिरी दाइले भन्नुभएको कुरा सधैं याद आउँछ । ‘छक्का पञ्जा–२’मा काम गर्दा हाम्रो भेट भयो । म कसरी काम गर्छु भन्ने उहाँलाई थाहा थिएन । धेरैले उहाँलाई सुनाइदिनुभएको रहेछ, स्वस्तिमा घमण्डी छे । त्यसैले उहाँले मलाई त्यही सोचिरहनुभएको रहेछ ।
सेटमा काम गर्दा कत्तिजना कतिखेर काम सकिन्छ र घर जानु भनेर बस्थे । काम सकिनेबित्तिकै घर कुद्थे । तर म साँझ अबेर ९÷१० बजेसम्म पनि सेटमै बस्थेँ । त्यो बेला उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो– तिमी कतिखेर काम सकेर घर जाउँ भनेर सोच्दिनौं, यो राम्रो कुरा हो । तिमी अहिले जुन सेटमा छौ, त्यो सेटमा हजार जना मान्छेले आउने सपना देखिरहेका छन् । तिमी आज यो ठाउँलाई कति सम्मान गर्छौ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । आज तिमी यहाँ नभएको भए यही सेटमा आउने सपना पालेर बसिरहेकी हुन्थ्यौ । यो सत्यलाई नभुल्नू । उहाँले भनेको यो कुरा म जहिल्यै सोच्छु । सुटिङमा कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्यो भने यो सेटमा अहिले म नभएर अरु भएको भए त्यो ठाउँमा म पुग्ने सोचिरहेकी हुन्थेँ भन्ने सोच्छु ।
आलोचक र फिल्म मेकरहरुबीच सुरु भएको शीतयुद्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? फिल्म उद्योग फस्टिनमा समालोचकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ? के नेपाली समालोचना पनि नेपाली फिल्म उद्योग झैं ‘कमजोर’ छ ?
चलचित्र बनाइसकेपछि मेकरहरुले सोच्नुपर्छ कि गाली आउँछ कि ताली । मैले एउटा आर्ट ल्याएर बजारमा राखेको छु भने मैले भयङ्कर गरेँ भनेर कहिल्यै पनि अपेक्षा गर्नुहुन्न ।
मैले त्यति धेरै बुझेको छैन । थुप्रै समीक्षकले मेरो आलोचना गर्नुभएको छ । कतिले व्यक्तिगत रुपमा आलोचना गर्नुभएको छ । मैले उहाँको फोन उठाइनँ भनेर त्यसैलाई इगो बनाएर नकारात्मक आलोचना गर्ने पनि हुनुहुन्छ । समीक्षा र पत्रकारिताको आचारसंहिताबाहिर गएर लेख्न नहुने हो, तर लेख्नुहुन्छ ।
साथै, निकै राम्रा समीक्षक पनि थुप्रै हुुनुहुँदोरहेछ, मलाई त थाहै थिएन । ‘बुलबुल’पछि मैले अनुभूत गरेँ । त्यसपछि मैले केही समीक्षक र पत्रकारसँग बसेर अन्तरवार्ता दिँदा मलाई थाहा भयो कि, चलचित्र उद्योगबारे मलाई केही थाहा नै रहेनछ । एक घण्टा सँगै बस्दा मैले कति कुरा धेरै थाहा पाएँ । उहाँहरुको कुुरालाई मैले मनन् गर्नुपर्छ ।
भोलि मेरो चलचित्र बजारमा आउँदा मैले तयार भएर बस्नुपर्छ, स्वस्तिमाले कि ठीकै काम गरी अथवा झुर काम गरी वा राम्रो काम गरी भन्नुहुन्छ । यसलाई मैले मनैदेखि स्वागत गर्नुपर्छ भन्नेमा म तयार हुनुपर्छ ।
‘बुलबुल’ गर्दा प्रशंसा गर्ने एकजनाले मलाई त्यसपछि आएको ‘हजार जुनीसम्म’ हेरेर व्यक्तिगत रुपमै दर्शकको अपेक्षा डाउन गरिदियौ भन्नुभयो । त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गरेँ । यो कुरा हामी कलाकार र मेकर दुवैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
‘रणकला’कै लेबलमा ‘गौरी’ (घामड शेरेमा स्वस्तिमाले अभिनय गरेको क्यारेक्टर) लाई दर्शकले पाउँछन् ?
‘रणकला’कै लेबलमा ‘गौरी’को क्यारेक्टर छ कि छैन भनेर मैले भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने क्यारेक्टर बलियो हुनमा स्पेसको पनि भूमिका हुन्छ । ‘रणकला’मा मेरो स्पेस धेरै थियो । त्यसमा मलाई जज गर्ने मौका पनि धेरै थियो । ‘गौरी’मा कम स्पेस छ । त्यसैले यसमा मलाई जज गर्ने मौका पनि कम पाउनुहुन्छ ।